Nevis inokoka vafambi vanoziva nezvehutano kuti "Ingova" muNevis
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » Nevis inokoka vafambi vanoziva nezvehutano kuti "Ingova" muNevis
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nevis Tourism Authority yakaparura nyowani yehutano hwekusimudzira vhidhiyo inoratidza zviitiko zvehutano munzvimbo ino yechitsuwa.
Vhidhiyo nyowani inojekesa yakasarudzika maficha echitsuwa ichi sezvo ichinyanya kutarisisa pahutano huri kukura uye hutano mushambadzi wevashanyi.
Nyanzvi dzehutano hweNevisian nenzvimbo zvinoratidzwa muvhidhiyo inosanganisira kumira paNevis Hot Springs.
Mune ino nhambo nyowani yehutano, iyo Tourism Authority iri kukoka vanhu kuti vagovane avo mavhidhiyo avo ekuti vanoshandisa sei hutano mukuita kwavo kwezuva nezuva.
Nevis Tourism Authority (NTA) yakanangana nekuwedzera vashanyi nzvimbo yehutano uye vafambi vafambi nekutanga kwevhidhiyo nyowani inosimudzira inosimbisa zviitiko zveNevis zvekugara zvakanaka. Yakaburitswa munaKurume 16, vhidhiyo yave kuwanikwa pawebhusaiti yeNTA www.nevisisland.com pamwe nechavo media media chiteshi. Vhidhiyo iyi inokoka vashanyi kuti vauye, vaongorore uye vanakirwe nezororo rekuzorora uye batane pamwe nemweya nemweya wechitsuwa ichi chakakosha.
The itsva #JustBeNevis vhidhiyo ichashanda semotokari kuratidza iwo akasarudzika maficha enzvimbo uye kunanga chikamu chinokura chehutano nehutano hwevashanyi. "Sezvo vafambi nekuwanda vanogamuchira mararamire ane hutano uye maitiro, Nevis inopa vashanyi mukana wakakwana wekutiza kubva kunhamo dzehupenyu hwezuva nezuva uye kuzorora nekumutsiridza mune yakasvibirira, yakasikwa nharaunda. Vhidhiyo iyi inotibatsira kuisa Nevis senzvimbo inosarudzika yevaenzi vanotsvaga zviitiko zvezororo zvinotarisana nehupenyu hwavo, "akadaro Nevis Tourism Authority CEO Jadine Yarde. "Kuwedzera kune edu akasarudzika nzvimbo dzekutandarira, isu zvakare tine vazhinji vane hunyanzvi vanopa hutano - varapi vemasaji, varairidzi veyoga, guruti yekusimbisa muviri uye nyanzvi dzezvehutano, avo vanopa zvirongwa zvakasarudzika uye zviitiko zvakakosheswa zvevaenzi."
Vhidhiyo yacho, ingori pamusoro peminiti kureba, inokoka vafambi kuti vauye Ingova muNevis, uye inoratidza akati wandei zviitiko zvevanoziva nezvezororo. Kufema tichinakidzwa neyoga yegungwa, rusununguko makakatanwa nehupfu panguva iyoyo yemuviri kushambadza uye kumwe kurapa kwespa, Shanduko paunenge uchiita tsika dzako dzekufungisisa uye Embrace izvo zvekunze zvekutsvaga, zvichipesana neshure kweyekunaka nzvimbo dzinoyevedza uye panoramic maonero.
Vanoverengeka vevashandi vehutano hweNevisian nenzvimbo vanoonekwa muvhidhiyo, kusanganisira iyo Nevis Hot Springs, uko vashanyi vanogona kunakirwa nerubatsiro rwekurapa kwemvura inopisa; iyo Bac 2 Midzi yangu Spatique, eco-inoshamwaridzika yeWholistic Spa neJuice bar inopa huwandu hwetsika tsika dzekuporesa dzakatorwa kubva kuAfrica neIndia; uye siginecha kurapa kurapa paMyra Jones-Edith Kirby Jones Wellness Center.
Kuzadzisa iyo #JustBeNevis vhidhiyo yehutano, uye kugadzira hurukuro hombe pamusoro pehutano uye hutano, iyo NTA irikukoka vashanyi kuti vagoverane mavhidhiyo ezvavanonyanya kuzvitarisira maitiro, kana maitiro avanoita hutano mukuita kwavo kwezuva nezuva, pane iyo NTA's Instagram uye Facebook mapuratifomu vachishandisa iyo hashtag #JustBeNevis. Mavhidhiyo anozivikanwa kwazvo achagamuchira chipo kubva kuNevis, mukutenda rutsigiro rwavo. Bhurocha rakazara re "Wellness", rine ruzivo pane ese echinyakare uye asiri echinyakare hutano uye hwekuzvitarisira zviitiko zvakagadzirwa, zvakagadzirirwa kupa vashanyi nezvese zvavanoda kuti vazive kugadzira yavo yakakwana zororo muNevis. Iyo bhurocha ichave ichiwanikwa pane iyo NTA webhusaiti.
Iyo NTA iri kuvhurawo yemwedzi nemwedzi "Tizira kuNevis" akateedzana mwedzi uno, inozoonekwa pavari YouTube chiteshi, uye ita hurukuro pamwe nemhando dzakasiyana dzeinonakidza uye hunyanzvi hweNevisian hunhu hwunotaura dzakasiyana zvinhu zvekuenda. Chikamu chekutanga chakanangana nehutano, uye nyeredzi Edith Irby, muridzi weEdith Irby Jones Wellness Center, uye nyanzvi yemishonga Sevil Hanley, chinzvimbo chinotungamira pakurapa kwemidzi yemuno yakasimwa nemiriwo.
Wellness yekushanya indasitiri yemabhirioni-emadhora uye zvinoenderana neGlobal Wellness Institute (GWI), isiri-purofiti yepasirese yekutsvagisa yakanangana neindasitiri yehutano hwepasi rose, saizi inofungidzirwa yemusika wepasi rose wehutano nemusika wehutano mu2020 yaive $ 4.94 trillion uye inogona kusvika $ 5.54 trillion muna 2022.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Nevis Wellness zviitiko shanyira iyo Nevis Tourism Authority webhusaiti pa https://nevisisland.com/wellness. Inzwa wakasununguka kutitevera pa Instagram (@nevisnaturally), Facebook (@nevisnaturally), YouTube (nevisnaturally) uye Twitter (@Nevisnaturally).
Nevis chikamu cheFederal of St. Kitts & Nevis uye iri muLeeward Islands yeWest Indies. Yakaenzana muchimiro negomo rinoputika pakati payo inozivikanwa seNevis Peak, chitsuwa ndiyo nzvimbo yekuzvarwa kwababa vekutanga veUnited States, Alexander Hamilton. Mamiriro ekunze akajairika kune mazhinji egore netembiricha yakadzika kusvika pakati pe80s ° F / pakati pe20-30s ° C, mhepo inotonhorera uye mikana yakaderera yemvura. Kufambisa nendege kuri nyore kuwanikwa nehukama kubva kuPuerto Rico, uye St. Kitts. Kuti uwane rumwe ruzivo nezveNevis, mapakeji ekufambisa uye pekugara, ndapota bata Nevis Tourism Authority, USA Tel 1.407.287.5204, Canada 1.403.770.6697 kana webhusaiti yedu www.nevisisland.com uye paFacebook - Nevis Nenzira.
Dzimwe nhau nezve Nevis
Vanhu vaviri vafa muHyatt Ziva Riviera Cancun resort ...
Severin Hotel: Inofarirwa nevafambi pa300 Zuva nezuva...